Sollọ Ngwọta Ọgwụ Dental | China Dental Solutions Nsukka na Suppliers
Ọrịa Ofufe Ọrịa
Ndị na-ehicha Ultrosonic
Endoscope &sa & Disinfection
Ntughari nwa nwoke
Obere Steer Sterilizers (Autoclaves)
Ọkara Steam Sterilizers (Autoclaves)
Ala okpomọkụ Sterilizers
Ihe eji eri nri
Nchoputa nwa nwanyi
Mbukota obere akpa
Mbukota & Sterilization Area
Mpaghara Nchekwa Sterile
Ọgwụ Ahụike Ọgwụ
MA Ọ bụ Ngwaahịa
Medial N'uko Pendant
Ngwunye ọkụ na nyocha
Soft Bag -dị-Jupụta-Akara (FFS) Ngwọta
Plastic karama ISBM Ngwọta
Fụọ-Jupụta-Akara (BFS) ngwọta
Ifriizi-Fikiere ntụ ntụ SVP ngwọta
Ngwọta Ngwọta Ọgwụ Siri Ike
Disinfection & nwoke ịga ụlọ ọcha
Anụ ụlọ nyocha
Anụmanụ Mmanya Ọgwụgwọ
Ihe eji ehi ura ura
Ihe mgbochi biosafety
Ndu nchekwa nke ndu
Dị ọcha bench
High Energy Medical Electro ... Akpado
E gosipụtara atụmatụ: ■ ụzarị ọkụ X (6MV, 10MV na 15MV) na ọtụtụ elektrọn ...
Akpaka Door raygba Washer
Product Atụmatụ b Ikenyeneke mbiet ụlọ imewe na usoro The conical ulo na S ...
Akpaka na-agbanwe agbanwe Endoscop ...
High arụmọrụ saa onye na-agba ịnyịnya usoro akpaka endoscope washer nwere ike rụchaa nke ...
XH507 Ime Otu
Atụmatụ lamp Oral oriọna Enwere ike idozi agba ọkụ ma nwee illumi abụọ ...
RXY Series Saa-sterilaiz-F ...
Isi nkọwapụta nkọwapụta: 1ml-100ml Mmepụta ikike: 10-500 vials / minute F ...
Akpaghị aka tree ụgbọelu Ultr ...
Okpokoro sterilizer Kasị-T (...
Njirimara ■ Na-ehicha ụdị mmiri mmiri mepere emepe na mkpuchi nwere ike iwepu ...
Atụmatụ ■ Nhazi ụdịdị na-eme ka mmezi dị mfe. 3-ọkwa ọsọ opt ...
YKX.Z Ultraviolet Ikpochapu ikuku
Principlekpụrụ ọrụ: UV ìhè + iyo. UV ìhè ga-ebibi microorganisms protein ...
Isi dị ka naanị ụlọ ọrụ R&D nke mba maka disinfection & steriliza ...
Okwu Mmalite BDS-H usoro nke diffusional hydrogen peroxide disinfecto ...
Atụmatụ Na-enye ọtụtụ ihe ngwọta ngwaahịa maka anụmanụ buru ibu, ma nwee ike p ...
Soft akpawa iche
Product iwebata BSE-B series usoro òké na oke soft bag isolator bụ ụdị ...
Product mmeghe The ulo ozuzu okuko isolator BSE-l nti na-adịghị mma pressu ...
BWS-M-G360 akpaka drinki ...
Mmiri mmiri na-adịghị ọcha nke ụlọ nyocha na-a drinkingụ mmiri ọ stụ waterụ syst ...
Design Ihe eji eme nri na-adaba na ergonomic nọ ọdụ na ịgha ụgha, nke kachasị mma maka ọgwụgwọ ogologo oge.
■ A na-eme ihe eji eme oche ahụ n'ụzọ dị iche iche, ebe a na-agbatị ụkwụ ụkwụ site na PU na-agba ụfụfụ siri ike, nke na-eguzogide ọgwụ na-adịghị mfe imebi. Ọnọdụ oche kachasị dị ala bụ 380mm, nke dị mfe maka ndị ọrịa ịrịgo na ala.
■ Akwa akpụkpọ anụ dị nro dị elu nke nwere nkwado lumbar na njigide njigide isi nwere mmetụta mkpuchi siri ike.
Chair Peach yiri ekara azụ imewe maximizes ụkwụ ohere nke ndị dọkịta na-ana achi achi infinitely nso n'etiti ndị dọkịta na ndị ọrịa.
XH605 Dental Unit
Implọ ọrụ ezé eze bụ ngwaọrụ ọgwụgwọ ezubere maka ịwa ahụ eze. Ọ nwere ike izute ihe ndị a chọrọ maka ọkụ ịwa ahụ eze, mmiri na wdg.
XH502 Ngalaba eze
E mepụtara Grace-D XH502 Dental Unit dabere na isiokwu nke "Enwee ọgwụgwọ" site na SHINVA. Microcomputer na-achịkwa akpaka na LCD ike ezigbo oge ngosi na-eme ka ọrụ dọkịta dịkwuo mfe ma nwee ọgụgụ isi. Ihe omume ergonomic na-eme ka ndidi nwee ahụ iru ala ma belata mgbatị na mgbu na ọgwụgwọ ahụ. Omume ọma ya zuru oke na-enyere ndị ọrịa aka ịnụ ụtọ ọgwụgwọ ahụ.
XH501 Ngalaba eze
E mepụtara Grace-D XH501 Dental Unit dabere na isiokwu nke "ọgwụgwọ dị mma" site na SHINVA. Ihe a na-echebara nkasi obi na ịdị mma nke nleta onye ọrịa na ọrụ dọkịta. The magburu onwe ihe nhọrọ, ergonomic imewe, microcomputer akpaka akara na ebu mmepụta usoro na-eme ka ọ pụrụ ịdabere na arụmọrụ, adaba ọrụ na mara mma anya.
Smart Automatic Washer-disinfector
A na-ejikarị Smart Series washer-disinfector eme ihe maka ịsacha, disinfecting na ihicha nke akụrụngwa (gụnyere eze aka), iko mmiri na arịa plastik na ụlọ ọgwụ CSSD ma ọ bụ ime ụlọ ọrụ.
Ihe nhicha ahụ na disinfection na-agbaso ọkọlọtọ mba ụwa EN ISO 15883.
Kasị Steam Sterilizer-Klas B
Kasị Steam Sterilizer: T18 / 24/45/80 bụ a klas B tabletop sterilizer. Dị ka ụdị nke sterilizer dị elu, ọ na-ewe uzuoku dị ka usoro nsị ya nke nwere nchekwa na akụ na ụba ngwa ngwa. , omenaala, mmiri a na-ekpuchighi wdg.
Kasị Steam Sterilizer
Kasị Steam Sterilizer: T60 / 80 dị ka ụdị nke nnukwu nsogbu sterilizer, ọ na-ewe uzuoku dị ka ya nwoke ịga ụlọ ọgwụ usoro nke bụ ngwa ngwa mma na akụ na ụba, inductive ọrụ. Usoro ịrụ ọrụ nke ọma na-agbapụta mgbapụta abụọ na nnukwu ikike ịchekwa ngwa ngwa bụ ngwa ngwa karịa MOST-T usoro usoro sterilizer maka mgbapụta ọsọ na ọgbọ uzuoku. A na-ejikarị ha eme ihe na ngalaba stomatological, ngalaba ophthalmological, ime ụlọ ọrụ na CSSD iji mee nsị maka akwa mebiri emebi ma ọ bụ nke a na-agbasaghị, arịa, usoro ọdịbendị, mmiri mmiri na-ekpuchighị wdg
Digital Cassette Sterilizer bụ ngwa ọrụ akpịsị aka ngwa ngwa na-arụ ọrụ nke na-eji uzuoku dị ka ọkara. Kwesịrị ekwesị maka ịgba ọgwụ mgbochi nke ngwaọrụ ahụike nke nwere ike iguzogide nrụgide uzuoku, dị ka aka aka eze, ngwa ọrụ nkenke ophthalmic, endoscope siri ike na ịwa ahụ, wdg.
Shinva: Na-elekwasị anya na ogo dị elu